Mareykanka oo faah faahiyay duqeyn uu ka fuliyay Gobolka Bari | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Mareykanka oo faah faahiyay duqeyn uu ka fuliyay Gobolka Bari
War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Bari ee Maamulka Puntland.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay 27- Bishaan July duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen Buuraha Golis ,isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Daacish-ta Soomaaliya.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen hal Xubin oo ka tirsanaa Daacish, isla markaana sidoo kale ay baaritaan ku sameyn doonaan hadii dad rayid ah ay wax ku noqdeen duqeyntaas.
Warkaan kasoo baxay Taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ayaa kusoo aadaya xilli sabtidii todobaadkaan Warbaahinta Dowladda Soomaaliya ay baahisay in duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay Buuraha Golis lagu dilay Xubin ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab.
Taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa loo soo Magacaabay taliye Cusub oo beddelay taliyihii hore,kaas oo dhawaan soo gaari doona Magalada Muqdisho.